चिन्तन चौतारी: August 2020
तीजलाई सकारात्मक संस्कृतिका रूपमै ग्रहण र अभ्यास गरौं, बेथितिका रूपमा होईन । बेथितिले सांस्कृतिक पवित्रतालाई नै नष्ट पारिदिने खतरा रहन्छ ।
हिजोको पितृसत्तात्मक समाजमा हाम्री आमा दिदीबहिनीहरुले तीजमा मनभित्र गुम्सिएको इच्छा आकांक्षा र पिर व्यथाहरु पोख्न र सामाजिक असन्तुष्टि प्रकट गर्न तीजलाई सदुपयोग गर्नु स्वभाविक थियो । अब हामीले चाहिँ निर्धक्क भएर नारी हकहित र समानताको सन्देशमुलक गीत गाउँदै समाज परिवर्तनमा जुट्नुपर्छ ।
कोरोना महामारीका कारण एकै ठाउँमा भेला भएर तीज मनाउने अवस्था नभएको हुनाले जो जहाँ छौं त्यहीँ घरभित्रै सामान्य तरिकाले तीज मनाउन र सामाजिक दूरीको ख्याल गर्न पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
हामीले अपनाउने सचेतताले कोरोनालाई नियन्त्रणमै राख्न सफल हुनेछौं भन्ने विश्वासका साथ सम्पूर्ण हिन्दु आमा दिदीबहिनीहरुमा हरितालिका तीजको हार्दिक हार्दिक शुभकामना!
०५ भाद्र ०७७
Posted by Chandra Magar at 8:27:00 PM No comments:
आफ्नो सुरक्षा आफैंले गरौं
कोरोना महामारीसँग लड्न सरकारको तयारी कस्तो छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा मन्त्री भन्छन्, आफ्नो घरमा पाहुना आएकाछन्, हतार छ, बोल्दैन भनेसी बोल्दै बोल्दैन नि!
चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीले संक्रमणको जोखिम कम गर्न पिपिइ माग गर्दा मन्त्री भन्छन्, भान्सामा लाउन समेत पिपिए मागे ।
स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा किन भ्रष्टाचार भयो भन्दा मन्त्री भन्छन्, जवाफ दिन आवश्यक छैन ।
क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित पारौं भन्ने आवाज उठाउनेहरुलाई मन्त्री भन्छन्, तिनका आँखामा मोतियाविन्दु लागेको छ ।
पिसिआरको दायरा बदाउनुपर्छ, हस्पिटलहरुमा आइसियु र भेन्टिलेटर थप्नुपर्छ भन्दा मन्त्री भन्छन्, पिसिआरको गीत सक्यो अब भेन्टिलेटरको गीत गाउनेहरु गाइरहुन् ।
दिनहुुँ संक्रमित र मृत्यु दर बद्न थालेकाले कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकारले अलि गम्भीर र प्रभावकारी काम गरोस् भन्नेलाई छुच्चो मन्त्री भन्छन्, तिनीहरुको मति सुध्रियोस्, शुभकामना छ ।
यी सबैको एकमुष्ट जवाफ प्रधानमन्त्रीले झन् सजिलैसँग दिन्छन्,"भ्रष्टाचार भएकै छैन, मन्त्रीको संलग्नता त झन् छदैछैन । देशमा त रामराज्य चलिरहेको छ ।" जब उनको दाबीलाई घटनाक्रमले गलत पुष्टि गर्दै लान्छ तब तुरुन्तै भन्छन्,"मलाई त थाहै छैन ।" उनी बल्ल सत्य बोल्छन्, हुन पनि आफ्नैं ईमान समेत थाहा नपाउनेबाट अरु आशा राख्नु नि व्यर्थ नै हो ।
हाम्रो समाजमा कथित जातीय अहंकार, सामाजिक विभेद, धार्मिक कट्टरपन्थी सोच, लैङ्गिक हिंसा, रुढीबादी संस्कार, जघन्य अपराध, आर्थिक-श्रम शोषण जस्ता तुच्छ कुराहरुलाई पनि जायज र स्वभाविक ठान्ने एउटा हिस्सा छ । त्यसले आफ्नो स्वार्थपुर्ती गर्न खराबलाई पनि सधैं सहि नै भनिरहन्छ । त्यही एउटा हिस्सा अझै पनि सरकार र मन्त्रीले गरिरहेका अनेकौं कुकर्मका वावजुद गुणगान गाउनमै ब्यस्त छ । तिनले सिर्फ दम्भ प्रदर्शन गर्नु, नीतिगत लुट मच्चाउनु, चलखेल र छलछाम गर्नुलाई नै सबथोक मानेका छन् ।
यतिबेला हामीलाई परिस्थितिले गम्भीर संकेत गरिरहेकोछ । अब उच्च ओहदा र तिनको पहुँचमा रहेकाले सरकारी र निजी अस्पतालहरुमा आफ्नो र आफ्नो परिवारको लागि आईसियु र भेन्टिलेटरहरु छुट्ट्याएर सुरक्षित राख्नेछन् । कोरोना संक्रमित सर्वसाधारण जनताहरु चाहिँ कोही अस्पताल जाने साधन नपाई घरमै टड्पिएर प्राण त्याग्नुपर्नेछ, कोही अस्पतालकै आँगनमा बेड खोज्दाखोज्दै छट्पटिएर मर्नुपर्नेछ । हाम्रै सामुन्ने कसैले आफ्नो आमाबुबा त कसैले छोराछोरी गुमाउनु पर्नेछ या आफैं मर्नेछौं । तर पनि त्यो अनैतिक झुण्डले यी सम्पूर्ण घटनालाई जायज र स्वभाविक नै ठानिरहनेछ । त्यो जमातले हाम्रो मरणमा कुनै सरोकार राख्नेछैन, कुनै पछुतो मान्नेछैन, आत्मग्लानी महशुस हुनेछैन, दु:ख मनाउ गर्नेछैन । उनीहरुको लागि राज्यको गैरजिम्मेवारीपनले आम मान्छे मरिरहनु कुनै समवेदनशील विषय नै हुँदैन । हाम्रो लागि कहालीलाग्दो विडम्बना होला तर तिनीहरुका लागि एक सामान्य परिघटना मात्रै हुनेछ ।
तसर्थ, आफू जोगिने र आआफ्नो घरपरिवार र आफन्तलाई जोगाउने कोशिस गरौं । कोरोनाले रातो बत्ती बालुन्जेल संयमित बनौं, केही समय धैर्यता अपनाऊ । समय कठिन होस् या सहज, सधैंभरी रहिरहदैन । यस सामुहिक युद्धमा तपाई हामी सबैजना उत्तिकै सशक्त योद्धा हौं । सबैले मनोबल उच्च राखौं । ०३ भाद्र ०७७
Posted by Chandra Magar at 8:21:00 PM No comments:
आदिवासी जनजाति र युवा दिवस
आदिवासी जनजातिहरुको सदियौंदेखि आफ्नै मौलिक कला, संस्कृति, संस्कार, भाषा, भेषभूषा, भिन्नै खालको परम्परागत मुल्य र मान्यताहरु छन् । अहिले लोपोन्मुख ती सबैको संरक्षण, सम्बर्द्धन र जगेर्ना राज्यको तर्फबाट नै गरिनुपर्दछ किनकि ती राज्य र समाजको साझा सम्पत्ति हुन् । त्यसैले सबैलाई सम्मान, पहिचान र अस्तित्व प्रदान गर्नु राज्यकै दायित्व हो ।
आदिवासी जनजातिको अनुकरण गर्नैपर्ने एउटा कुरा प्रकृति प्रेम पनि हो । प्रकृतिलाई सम्मान गरेर पुज्नुको अर्थ प्रकृतिलाई मानव जननी र सभ्यताको सृष्टिकर्ता ठान्नु देखिन्छ । अहिले विश्वभर कोरोना भाइरसले तहसनहस पारिरहेको बेला प्रकृति र जीवनबीच रहने परस्पर सम्बन्धको सान्दर्भिकता झनै प्रष्ट भएको छ ।
नेपालमा ०६८ को जनगणना अनुसार १६ देखि ४० वर्षका युवावर्गको संख्या ४०.३५ प्रतिशत रहेकोे छ । त्यसैगरी १६ देखि ३५ वर्षका युवा समूह ३४.३६ प्रतिशत रहेको छ भने १५ देखि २९ वर्षका युवा २७.८ प्रतिशत र १५ वर्ष मूनिको जनसंख्या हेर्दा झण्डै ३४.८ प्रतिशत छ ।
तसर्थ, यहीँ उमेर समुहका प्रगतिशील विचार, दृढ़ इच्छाशक्ति र शैलीमा नवीनता भएका युवाहरु नै राष्ट्र निर्माणको महत्त्वपूर्ण आधारस्तम्भ हौं । यहीँ तथ्यलाई सिरोपर गर्दै देश विकासकाे भरपर्दाे ताकत बनेर समृद्द देश बनाउनका लागि युवाहरूलाई बलियाे खम्बा बन्ने प्रेरणा मिलोस् । हामी सम्पूर्ण युवाहरूको एकता र प्रतिबद्धताले देशलाई आवश्यक योगदान पुगोस् ।
हामी सबैको चाहना आधुनिक सभ्य समाज नै हो । मानव र प्रकृतिको सन्तुलनमा मात्रै त्यो प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने आदिवासी जनजातिहरुको बैज्ञानिक बुझाइलाई आजका युवाहरूले आत्मसात र अनुसरण गर्न जरुरी छ । यस आदिवासी दिवसको अवसरमा हामीलाई महामारीसँग एकजुट भएर लड्ने र परास्त गर्ने प्रेरणा मिल्नेछ भन्ने आशा र विश्वासका साथै पर्व मनाउदै गर्दा कोरोना संक्रमणलाई ख्याल गरेर सजगता अपनाउन पनि आग्रह गर्न चाहन्छु ।
सम्पूर्ण महानुभावहरुलाई २६औँ अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति दिवस र अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसकाे हार्दिक शुभकामना!
Posted by Chandra Magar at 6:31:00 PM No comments:
राजनैतीक ध्रुवीकरणको आवश्यकता
देशमा आमूल परिवर्तन गर्ने सपना बुन्दै समाजमा व्याप्त सबै खालका उत्पीडनहरुको अन्त्य गर्न आन्दोलनमा होमिएका थुप्रै मान्छेहरुको सामुहिक खुशीहरु मात्रै स्थगन होईन, जीवन नै अवसान भएका छन् । अधिकांशले राजीखुशी मृत्यु स्विकारेका थिए, गोलीले मुटु छेडेर रक्तमुछेल हुँदा पनि हाँसीहाँसी प्राण त्याग्नु चानचुने कुरा थिएन ।
जनयुद्ध र जनआन्दोलनको माध्यमबाट प्रस्फुटन भएको राज्य पुनर्संरचनाको मानसिकतालाई आत्मसात गर्ने कांग्रेसको तत्कालीन नेतृत्वकर्ता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधन भइसक्यो, नयाँ नेतृत्वले मुद्दाहरुलाई अंगालेर सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नै सकेन ।
देशमा राजनैतिक परिवर्तन आवश्यक रहेको यथार्थलाई स्वीकार्ने तत्कालीन एमालेको महासचिव माधव कुमार नेपाल पार्टीभित्रै हतोत्साहित भएर छट्पटिरहेका छन्, उनको उत्तराधिकारीलाई ती मुद्धाहरु प्रति खासै लगाव देखिदैन ।
एक दशक विभिन्न नारा लगाएर युद्धमा होमिएका प्रचण्ड बादलहरु बेथितिका साक्षी र रमिते मात्रै बने, संसदीय खेलमा चुर्लुम्मै डुबेर राजनैतिक कोर्सलाई बदल्ने हिम्मत गर्नै सकेनन् ।
सर्वहारा, श्रमजीवी र उत्पीडनमा परेकाहरुको अधिनायकत्वको वकालत गर्ने मोहन वैध्य किरण, गौरव, बाबुराम, विप्लवहरु छेउ परे/पारिए ।
अन्तमा हामीले यस्ता ऐतिहासिक राजनैतिक उपलब्धिहरु प्राप्त गरेर पनि गुणात्मक फड्को मार्ने अवसरबाट चुक्नुका साथै बाँदरको हातमा नरिवल भन्ने उखान चरितार्थ भइरहेको आभास गर्नुपरेको छ ।
अहिलेका राजनैतिक एजेन्डाहरु प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी पार्टीले जबर्जस्ती स्थापित गराएकै हो । त्यसको लागि उत्पीडित जनताले अपार समर्थन र त्याग पनि गरेकै हुन् । हजारौंको दुःखद् मृत्यु हुनु, अंगभंग हुनु अर्को कहालीलाग्दो पाटो छदैछ । युद्धकालिन घाइते मनहरुलाई अचेल कमरेड प्रचण्डसँंग अनेकौं प्रश्नहरु सोध्न मन लाग्दो हो तर यतिबेला तिनै सुप्रिमो प्रचण्ड निरिहि हुन बाध्य छन् । अहिले परिस्थितिबस् तिनीहरुलाई जवाफ चाहिँ राष्ट्रपतिसँग मिलेर केपी ओलीले निरंकुश तरिकाले रन्थनिने गरि दिदैछन् । यदी यहीँ शैली केही समय निरन्तर रह्यो भने त्यत्रो उत्साहका साथ ल्याइएको व्यवस्था धुजाधुजा हुने निश्चित छ । समाजवादको यात्रामा निस्किएर फेरि सामन्तवादकै आँगनमा आइपुग्दा यो व्यवस्थाका निम्ति रातदिन भोकप्यासै खटिएकाहरुले आफ्नो जवानी र पसिनालाई सम्झिएर गर्व गर्नुको सट्टा कताकता पछुतो पनि मान्दा हुन् । वास्तवमा ती साच्चिकै इमानदार थिए, धोकेवाज त अरु नै निस्किए ।
देशमा अहिले हेर्दा रूपमा अग्रगमन त छ तर सारमा प्रतिगमन भोग्नुपरेको छ । सिद्धान्तमा समाजवाद भनिएको भए पनि व्यबहारमा भने दलाल पुजीवाद हावी छ । लेखिने र देखिनेमा धेरै अन्तर देखिदैछ । बिज्ञान र मार्क्सवादलाई नै निकम्मा पार्ने दुस्साहस हुदैछ । जनताको आशंका, असन्तुष्टि र प्रश्नको भुमरीमा दिनानुदिन व्यवस्था फस्दैछ । हजारौंको योगदान र बलिदानले शासन गर्ने पात्र त फेरिए, चरित्र फेरिएन । व्यवस्था फेरिए पनि गरीब दु:खीका अवस्था भने फेरिएन । सबैभन्दा दु:खको कुरा त नेताहरुले समयको माग अनुरुप देश र जनताको आवश्यकतालाई बुझेर सम्बोधन गर्नै सकेनन् । राज्य हाँक्नेहरुले नै परिवर्तनको मर्म र सामाजिक मनोभावनालाई आत्मसात गर्दै गरेनन् । देशप्रति वफादार र जनताप्रति जिम्मेवार बन्ने छाँट समेत देखाएनन् । तिनीहरु सित्तैंमा झैं पाएको शक्तिको उन्मादले क्रमश: अयोग्य र असफलताको बिन्दुतिर लम्किदै छन् तर पनि अहंकारले फुलेकै छन् । दुक्कै!
राजनैतिक पार्टी र नेतृत्वहरुबाट विगतमा थुप्रै गल्तीहरु भएका छन् । तैपनि जनताले माफी दिदै पटकपटक मौका दिइरहेका छन् । अब पनि निर्मम दंगले आत्मसमिक्षा र आत्मालोचना गरेर सुध्रिने प्रण नगर्ने हो भने निश्चित छ, समय अनुकुल रहिरहने छैन ।
अबको विकल्प कि पार्टीहरु सच्चिने कि त सक्किने बाहेक अर्को छैन । जनताले पनि कि यिनैका विरुद्ध खरो उत्रिने कि त भरोसायोग्य अरु कोहि खोज्ने नै हो । प्रतिगामी, यथास्थितिवादी र प्रगतिशील व्यक्तिहरुको बीचमा ध्रुवीकरण जरुरी भइसकेको छ । निकट भविष्यमा एउटा सचेत किसिमको सामाजिक हलचल अत्यावश्यक छ । भलै एउटा अशल तानाशाहको कल्पना केवल कल्पना मात्रै हुनेछ ।
जनताले बहुला हात्तीको जस्तो अराजकता र गैरजिम्मेवारीपन धेरै सहिसके, अब शायद सहने छैनन् । यस्तो मनपरि सधैं चल्ने सम्भावना पनि हुदैन । मान्छेको चेतना कहिल्यै पनि दहको पानी जसरी यथास्थितिमा जमेर रहिरहन्न । समय सँगसँगै अझ अगाडी बद्ने बाटो खोज्छ खोज्छ नै ।
अति गर्नु, अत्याचार नगर्नु । अति गरे खटी हुन्छ । देश, जनता र स्वयम् उनैको भलाईका लागि बेलैमा चेतना हवस् ।
Posted by Chandra Magar at 7:09:00 PM No comments:
Labels: तेस्रो आँखा
कोरोना, न्यायलय र नेकपा
स्वर्ग र नर्क रहेछ भने पनि,
अरुको बुद्धिले स्वर्ग पुग्नेहरुभन्दा आफ्नैं विवेकले नर्क टेक्नेहरु नै बढी खुशी होलान् । अरुको हरेक काममा सधैं न्यायाधीश बन्न खोज्ने दुनियाँसँग साच्चिकैमा भने न्यायाधीश बन्ने सामर्थ्य नै हुदैन । आफ्नो जीवनकालमा आफ्नैं विवेक प्रयोग गरेर बाँंच्ने ब्यक्तिहरु नै खास अशल र सफलहरु हुन् ।
मान्छेको जनमदेखी मरणसम्मको अवधी मात्रै आफ्नो हो । तसर्थ, मृत्युको एकछिनअगाडि पश्चाताप गर्नुछैन भने जे गर्ने हो समयमै गर्नुपर्नेछ । समय सीमित छ ।
अन्धा छ कानुन । फैसला अन्धाधुन्ध नै गर्थ्यो । अहिले त त्यसैको निरन्तरता मात्रै हो । आम मान्छेका लागि निष्पक्ष छानबिन र न्यायको आशा त भगवान भरोसा नै थियो ।
आश्चर्य के मान्नु र!?
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, न्यायालय, राजनैतिक दल, अख्तियार, प्रहरी, प्रशासन जस्ता राज्यका प्रमुख अंगहरुले क्रमशः बिश्वास गुमाउँदै जानुले व्यवस्था नै पंगु बन्ने खतरा देखिदैछ । बेलैमा शुद्धीकरण थालौं ।
राज्यले नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता इमानदारीपूर्वक निर्वाह नगर्दासम्म यस्तै चलिरहनेछ । जतिसक्दो चाडो आचरण सुधारौं ।
क्यान्सर लागेपछि तुरुन्तै उपचार गर्नुपर्छ अन्यथा अन्यत्र फैलिएर जीउ नै जोखिममा पर्नेछ । समयमै सचेत बनौं ।
२३ जुलाई २०२०
मान्छे आफैंप्रति इमान्दार हुनुपर्छ अरुको सामु आफ्नो ईमान प्रमाणित गरिरहनु पर्दैन । अनेकन प्रयत्न त तिनले मात्रै गर्छन्, जो आफैंभित्र गलत छु भन्ने जान्दाजान्दै पनि सहि देखिने स्वाङ पार्नैपर्छ ।
आफ्नो सामुन्ने दुई वटा मात्रै बाटो छन्, दुई मध्ये एउटा बाटो हिंड्नैपर्छ भन्ने बाध्यता छैन । अर्को नयाँ बाटो आफैं खन्न पनि त सकिन्छ । कठिन हुनसक्छ तर अधिक खुशी र स्वतन्त्रता मिल्नेछ । त्यसो गर्दा जीवन खेर जादैन बरु परम सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ ।
यहीँ नै हो जीवन । सार्थक जीवनको प्रयोगात्मक आत्मविश्वास!
२७ जुलाई २०२०
विश्वभर महामारीले तहसनहस पारेर हामीलाई खतरापूर्ण घण्टी बजाउँदै गर्दा पनि सिमानामा कडाइ गर्न, लकडाउन पालना गर्न, हस्पिटलमा आइसोलेसन बेड, आइसियु र भेन्टिलेटरहरु थप्न, भौतिक पुर्वाधार, यथेष्ट स्वास्थ्य सामाग्री र जनशक्ति तयारी अवस्थामा राख्न, क्वारेन्टाइन व्यवस्थित गर्न लगायतका पूर्वतयारी गर्ने प्रशस्त समय पाएर पनि सदुपयोग गर्नमा नचुक्नु चुक्यौं ।
प्रकृतिको कृपाले बाँचिरहेका र भगवान भरोसामा विश्वास गर्ने हामीहरु कोरोना नियन्त्रणपछि पनि सबैसँग सकुशल भेट्न पाइयोस् ।
आफू जोगिने र अरुलाई जोगाउने सद्वुद्धी मिलिरहोस् ।
२९ जुलाई २०२०
Posted by Chandra Magar at 7:05:00 PM No comments: